नाकले बताउँछ लिंगको आकार ! – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौं । पुरुषको लिंगको आकार तथा प्रकारका बारेमा निकै चर्चा हुन्छन् । लिंग सामान्यतः सबै पुरुषको एकै प्रकारको हुँदैन । भिन्न भिन्न पुरुषको आफ्नै प्रकृतिको लिंग हुन्छ । जस्तैः बाङ्गो, टेडो, पातलो, मोटो तथा अनेक प्रकृतिको । खासमा लिंगको साइजले यौन सन्तुष्टिमा धेरै प्रभाव नपार्ने अनुसन्धानकर्ता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । यद्दपी कतिपय सेलिब्रेटीहरुले त खुलेरै भनेका छन् चरम यौन सन्तुष्टिका लागि आफूलाई चाहिने लिंगको साइजका बारेमा ।
केहि यस्ता साधारण अनुमान लगाउन मिल्ने तथ्यहरु छन् । जसबाट अनुमानकै भरमा पनि लिंगको आकार तथा लम्बाई पत्ता लगाउन सकिन्छ । जस्तैः कुनै देखिने अंगको आकार हेरेर पुरुषको लिंगको आकार पत्ता लगाउन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भनेको एउटा तथ्य के भने पुरुषको अनुहारको आकार हेरेर पनि उनको लिंगको साइजबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । जस्तैः अफ्रिकीहरुको अनुहार लाम्चो र मोटो आकारको हुन्छ । त्यसै अनुरुप त्यहाँका पुरुषको लिंग पनि मोटो र लामो हुने भनाई छ ।
त्यसो भए के कुनै पुरुषको नाकले बताउन सक्छ की उसको लिंगको आकार कति छ भनेर ? यदि तपाईंलाई कुनै पुरुषको लिंगको आकार पत्ता लगाउनु पर्यो भने उसको अनुहारमा अथवा उसको नाकमा ध्यान दिनुहोस् न की उसको तल्लो भागमा ! यदि तपाईं केटिमान्छे हुनुहुन्छ र लिंगको बारेमा जिज्ञासा छ भने पक्कै यो एउटा उपाय हुनसक्छ । दक्षिण कोरियामा केहि महिना पहिले गरिएको सर्भे भन्छ पुरुषको नाकको आकारले उसको लिंगको आकारबारे जानकारी दिन्छ ।
जस्तैः यदि कुनै पुरुषको नाक लामो वा लाम्चो आकारको छ भने सम्झिनुहोस् उसको लिंग समान्य भन्दा केहि लामो छ । कसैको बढि थेप्चो नाक भएपनि मोटो हुन सक्छ । त्यस्ता पुरुषको लिंगको साइज पनि मोटो हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर यो कुरा सबै पुरुषहरुमा लागू नहुन पनि सक्छ यद्दपी अधिकांश पुरुषको नाकको साइज अनुसार उसको लिंगको साइज पनि पत्ता लगाउन सकिने सर्भेको निष्कर्ष छ । दैनिक नेपालबाट साभार